ကား Bluetooth - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကား Bluetooth.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
Shenzhen Kaisinuo Electronics Co. , Ltd. သည် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်တင်းကျပ်စွာအကျိုးပြုသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် ကား Bluetooth.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Earldom ၏အကောင်းဆုံး Earldom FM Transmatter Bluetooth Bluetooth-Carr.0 Car BB Carb Car Charber Mp3 Music Player Computer - Earldom, Valchified ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်0န်ဆောင်မှုပေးသည်။BT လက်လွှတ်ချက်ကို၎င်း၏ built-in Microphone မှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုပါ။A2DP function ကိုထောက်ပံ့ပါ။ လက်ကိုင်ဖုန်းချိတ်ဆက်နေစဉ်တေးဂီတကိုတိုက်ရိုက်ကစားလိမ့်မည်။Built-in dual-usb 5V / 4.1A output 3.1A USB port ကိုထောက်ပံ့ရန် Smart Clansfing ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက်၎င်းကိုကားထဲတွင်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုအားသွင်းရန်အတွက်ရနိုင်သည်။SD / TF Memory Card နှင့် U disk ကိုထောက်ပံ့ပါ MP3 / WMA / APE / Flav / Flav / WAV format ဖြင့်တေးဂီတဖိုင်များကို Music files များကိုဖွင့်နိုင်သည်။
Earldom လက္ကားစပီကာ Lk2 ကောင်းသောစျေးနှုန်း - EarldomSpeaker Lk2 ။
အကောင်းဆုံး Earldom Outdoor Portable Trolley 100w အပြာရောင်သွားကြိုးမဲ့ကြီးကြီးမားသောဂစ်တာတီးမှုတ်သူ
Earldom အကောင်းဆုံး Earldom Outdoor Portable Trolley 100w အပြာရောင်သွားကြိုးမဲ့ဂစ်တာဂစ်တာဂစ်တာဂစ်တာစပီကာကိုပေးသွင်းသူ, ထုတ်ကုန်များသည်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။
အကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ် Tws1
5-31 နားကြပ် tws1 ။
အကောင်းဆုံးစပီကာ ET-A18 စက်ရုံစျေးနှုန်း - Earldom
Earldom အကောင်းဆုံးစပီကာ ET-A18 စက်ရုံစျေးနှုန်း - EarldomSpeaker et-a18
ET-A18 Puttable ကြိုးမဲ့စပီကာEarldom အကောင်းဆုံး ET-A18 A18 Protable Wirless Speaker Peaper Payry Picture - Earldomထုတ်ကုန်သည်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးယခုအခါစက်မှုလုပ်ငန်းအလားအလာများဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လူကြိုက်များသည်။
Earldom PD22.5W 10000MAH Power Bank Touch Switch LED Power Aluminum Alloy PowerBanks
Earldom PD22.5W 10000MAH POWER Bank Touch Switle Power Power Power Power Power Power Phild Power Power Power Aluminum Alloy PowerBanks ကုမ္ပဏီ - Earldom, Valbinious ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်0န်ဆောင်မှုပေးသည်။
2-in-1 Bluetooth Audio Commitizer Tripterter Tripter USB Bluetooth adapter
အကောင်းဆုံး Earldom ဆူညံသံများသည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များ BlotionoH AudioH Audifooth Audifonfonos Audfonos PK TWS Air Pro3Earbuds ပေးသွင်းသူ
Earldom ၏အကောင်းဆုံး Earldom ဆူညံသံကိုဖျက်သိမ်းသည့်ကြိုးမဲ့နားရွက်များ BlotionoH Audifooth Audifons Admons Air Pro3Earbuds ပေးသွင်းသူသည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်0န်ဆောင်မှုပေးသည်။